Ndingaona here kumusoro kweAmazon izwi rekutsvaga uchishandisa shanduro yemapurosoft software?
Hapana chikonzero chekutaura kuti nyika yekutsvaga pakutsvaga kutsvaga inoshandiswa inoshandiswa zvikuru nepamusoro pekutsvaga mazwi ezvinyorwa uye kusarudza kwavo kwakakodzera. Uye hazvina mhosva kuti nzvimbo ipi inoda kushanda chinhu chinokosha-inogona kuva inowanzoshamiswa kutsvaga muIndaneti kuburikidza nekutsvaga injini dzekutsvaga (seGoogle pachayo, Yahoo, Bing, etc.), kana zvimwe zvakanyatsotarisirwa asi kwete yakazara keyword strategy kukwira pamusoro kumusoro kwenzvimbo dzakakurumbira dzekutenga, dzakadai seAmazon kana eBay. Kusiyana chete pakati pemazinga ekutsvaga muIndaneti uye chero ecommerce kana kuderedza-kutumira bhizinesi ndechokuti tsvakurudzo yakadaro inofanira kunge iri niche-inotarisirwa uye kukwikwidzana. Uye pasi ini ndiri kuenda kukuratidzai nzira mbiri dzakajeka dzekuona Top Amazon tsvakurudzo nemashoko anokosha. Saka, kushandisa shanduko yakakosha yekugadzirisa iwe pachako, ndinokurudzira kana kuedza shanduro yakagadziriswa (Keyword Inspector), kana kuti yekurarama yakawanda pakushumira kwako pasina, sezvainogara.
Keyword Inspector inzvimbo inonyanya kushandiswa paIndaneti inogona kukubatsira kuti uone mazita e-Amazon mazita ekutsvaga chero chinhu chipi zvacho kana chikwata chinyorwa. Ichi chikwata chinobatsirawo nehumwe hunhu hunozivikanwa seTending Keyword Search. Iyo inogona kukubvumira kuti iwe uite kakawanda-nokukurumidza-chengetedza hurongwa uye nguva dzose ramba uchikwanisa-kusvika-zuva nezvose zvitsva zvitsva munguva ichangobva kukwira kumusoro kweAmazon tsvaga. Chii chinowedzera - Keyword Inspector ine dzimwe mbiri dzakanyanya kupisa (inozivikanwa seIndaneti Tester uye Reverse ASIN), iyo inonyatsoita zvakanaka kana iwe uchida kuti zvigadzirwa zvako zvakagadziridzwa zvakakwana kuti upiwe zvakanyanya kudarika kuwanika paIndaneti ikoko. Chinhu choga chakaipa pamusoro peiyi chinyorwa chekutsvaga chikonzero ndechokuti nhamo, haina kana yega yega yakawanikwa. Mhosva chete inosara iwe kuti usarudze kana uchienda kunyoresa kwegore negore kana kuramba uchiwana pasina iyo.
Sezvandambotaura kare pakutanga, kutsvakurudza kwemashoko makuru kunotorwa pachikwata kune zvakawanda zvakafanana, kunyatsorega - mapeji ekutsvaga kutsvaga kweGoogle, kana kushanda pane zvakagadzirwa zvekutengesa kwebhizimisi kana kutumira mabhizinesi. Ndinoreva kuti nokuda kwechimwe chikonzero chedu rakanaka rekare rinonzi Keyword Planner nekutsvaga kwenyika yakawanda rave kurasikirwa zvikuru mukuzivikanwa, kunyanya kuburikidza nemakore achangopfuura. Nevanhu vakawanda vemu-ecommerce mapurisa uye zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa zvakanyatsoenderana nezvido zvavo nezvinangwa zvavo, hurongwa hwepakutanga hweGoogle (a.k.a.Google AdWords) hwakachengeta simba rawo rekare mukuzara. Ndinoreva kuti Keyword Planner inongova chinhu chimwe chete pakati pemhando dzakasiyana-siyana dzezvimwe zvakasiyana (uye nguva dzose pasina!) Zvinhu, izvo zvinobatanidzwa kuAdWords kuburikidza. Uye zvichiri kushandiswa kwete kungoita shanho rakasimba rekutengeserana, asi kuti uwane, somuenzaniso, kumusoro Amazon inotsvaga nemashoko makuru ezvinyorwa uye zvakakosha misoro mikuru.
Pashure pezvose, ngatishandisei - zvinhu zvakakomberedza zvinogara zvichichinja. Asi hazvirevi kuti isu tose tinofanirwa kuramba tichitarisa chete zvishandisi zvitsva, zvishandiso zvema software, kana kuti zvangobva kugadziriswa zvirongwa. Hungu, dzimwe nguva ivo vakanaka, asi ivo pachavo, ndichiri kutenda kuti Google Keyword Planner ichiri kutamba, kunyanya iyo iyo isinganyanyi basa rakawanda kuti igare yakarongeka pane inonyanya kuzivikanwa neAmerica product inotsvaga nekodzero dzekodzero Source .